Ny Ao Anatin’ny Tontolon’ny Blaogy Japoney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Novambra 2017 1:19 GMT
Fanamarihana: nivoaka tamin'ny Jolay 2005 ity lahatsoratra ity
Ra, Koreana iray efa andian-taranaka fahatelo monina ao Japana, izay “manana anarana japoney, manana fihodirana mitovy, mitovy fomba fiteny, ary mijery fahitalavitra mitovy” amin'ireo Japoney, ary na izany aza anefa, dia mbola heverina foana ho toy “ny vahiny eo amin'ny firenena nahaterahany”, ary mitady fanampiana amin'ny fandikàna ny blaoginy malaza Korean The Third (日本語) avy amin'ny fiteny japoney ho amin'ny fiteny angilisy sy fiteny hafa.”
Manantena i Ra fa ny blaoginy izay manolotra fahafantarana maro amin'ireo fifandraisana misy eo amin'i Japana sy ny Saikinosy Koreana, dia hanampy amin'ny fampiroboroboana fifanakalozankevitra hendry sy araka ny tokony ho izy mikasika ireo fihetsiketsehana vao haingana mankahàla Japoney tao Azia Atsinanana.
Ny Torolàlana ho an'ireo vao manomboka, avy amin'ny Toeram-pivarotana Kojakoja An-tokantranoHassles(日本語), dia blaogy izay mikaroka antontan-kevitra momba ireo olana manjo ireo konbini mpiasa sy ireo frantsay mpandraharaha ao Japana rehefa miasa miaraka amin'ireo orinasa lehibe, toa ny 7-11, izay manjaka amin'ny sehatry ny fivarotana kojakojan-tokantrano ao amin'izany firenena izany. Ireo karazana olana dia ahitana ny fitantanana ambanin'ny fenitra tokony ho izy, ny tsena diso miroborobo loatra, ary ireo fomba fanaovana vidin'entana mampiahiahy, miaraka amin'ny vokatra farany hoe tena sarotra ny hivelona amin'ny fitantanana toieram-pivarotana kojakoja tsy mandoa hetra ao Japana.
Takafumi Horie, 30 taona any ho any, Tale jeneralin'ny Livedoor, iray amin'ireo mpanome tolotra aterineto manana ny toerana indrindra ao Japàna, no manolotra ireo toro-hevitra mikasika ny asa, amina endrika ‘Fanontaniana’ sy ‘Valiny’ ho an'ireo rehetra ao amin'ny iray amin'ireo tranonkalany. Tena zava-dehibe tokoa io satria, manitrikitrika i Horie fa mba tsy handehanana any amin'ny orinasa iray sady hanarahana ireo an-tanan-tohatra misy ao amin'ny orinasa, ny lalana mahazatra, ny maha-ianao anao, ny famoronana sy ny fijery (ary ny asa tsara) dia ampy hahombiazanao ao anatin'i Japàna.
Susumi Fujita, filoha Cyber Agent, koa dia manana blaogy iray, Diarin'ny Lehiben'ny Orinasa Shibuya iray. Fujita, 26 taona avy eo, nanomboka ny Cyber Agent tamin'ny taona 1998 ho toy ny masoivoho fanaovana dokambarotra amin'ny aterineto, ary nahavita nanohitra ny firodanan'ny teknolojia ilay orinasa. Manolotra ny Ameblog ho antsika ny Cyber Agent ankehitriny, fitaovana iray fanaovana blaogy malaza.
Tao amin'ny Ninki Blog Ranking no nahitàna ireo blaogy.